दशैं पनि फास्ट ट्रयाक जस्तो भइरहेको छ : नायिका रेजिना उप्रेती – jagritikhabar.com
दशैं पनि फास्ट ट्रयाक जस्तो भइरहेको छ : नायिका रेजिना उप्रेती
लामो समय हराएपछि नायिका रेजिना उप्रेती फेरि विभिन्न फिल्मी जमघट र कार्यक्रमहरुमा देखा पर्न थालेकी छन् । ६ वर्षअघि विवाह गरेपछि फिल्मी दुनियाँबाट हराएकी थिइन् । केही समयअघि सम्पन्न चलचित्र कलाकार संघको अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । केही दिनअघि उनको रेजिना फिल्मस र शहिद फिल्मस् नामक कम्पनीले रक्षा नेपालको सहयोगमा ९ जना अभिनेत्रीलाई नवदुर्गा सम्मान गरेको छ ।
दशैं कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
– पहिला काठमाडौंमा हाम्रो घर थिएन । डेरामा बस्नुपथ्र्यो । धादिङको हाम्रो घर काठमाडौंबाट दुई घण्टामै पुगिन्छ । त्यसैले हामीलाई दशैंमा घर जानु सामान्य कुरा नै हुन्थ्यो । तर, अब काठमाडौं (सतुंगल) मा घर छ । बालबच्चा भए । व्यवहारमा परियो । त्यसैले दुई वर्षदेखि दशैं नै भनेर गाउँ जानु पर्दैन । बुबा र ममीहरु यतै आउनुहुन्छ ।
काठमाडौंमा पनि दशैं रमाइलो हुन्छ र ?
– रमाउन जान्यो भने जहाँ पनि रमाइलो । रमाउन नजान्नेका लागि कतै पनि रमाइलो हुँदैन ।
गाउँको दशैं कत्तिको मिस गर्नुहुन्छ ?
– जीवनमा बालापन भन्ने कुरा एकचोटी आउँछ र त्यसले जीवनभर भुल्न नसक्ने छाप छोडेर जान्छ । मेरो लागि गाउँमा वाल्यकालमा मनाएका प्रत्येक दशैंहरु सधैं मिस हुन्छ । हामीले चाहेर पनि त्यो उमेर, त्यो समय र त्यसबेलाको उमङ्ग फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं । अब त आफ्नो खुशीभन्दा पनि बालबच्चाको खुशीमा रमाउने समय आयो । ३ वर्षकी छोरी छ । ऊसँगै रमाउने र उसको खुशीमा हामी पनि खुशी हुने ।
पहिलाको दशैं र अहिलेको दशैंमा के भिन्नता पाउनु हुन्छ ?
– पहिला सबै कुरा नेचुरल हुन्थ्यो । अहिले हरेक कुरा आयातित हुन्छ । गाउँमा आफ्नै खेतको चामल हुन्थ्यो, करेसाबारीको तरकारी खाइन्थ्यो, घरमै पालेको खसी काटिन्थ्यो । अहिले सबै कुरा चाहिएपछि किन्यो, खायो ।
त्यसैले हामी नेपालीको जीवन अलिक फास्ट ट्रयाक भएको छ । दशैं पनि फास्ट ट्रयाक जस्तो दुई–चार दिनअघि देखि आयो–आयो भन्यो, एक–दुई दिनमा गयो–गयो भन्ने हुन्छ । पहिला–पहिला ६ महिनाअघि दशैंको प्लान बनाउँथ्यौँ । दशैं आउँदैछ भनेर धेरै पहिलादेखि रमाइलो मानिन्थ्यो । अब दशैं मुखमा आएपछि बल्ल आयो भन्ने बेला छ ।
भर्खरै नवदुर्गा सम्मानको आयोजना गर्नुभयो । कसरी आयो यस्तो आइडिया ?
– मेरो नाम, पहिचान भनेकै चलचित्र क्षेत्रसँग जोडिएको छ । जहाँ गए पनि, जे गरे पनि मनबाट ‘चलचित्र’ हटाउन गाह्रो हुँदोरहेछ । फिल्म बनाएँ, कलाकारिता त मुख्य काम भइहाल्यो । बीचमा श्रीमानको व्यवसायमा सहभागी भएँ । तर, चलचित्रकर्मले मलाई र मैले चलचित्रकर्मलाई छोड्नै नसक्ने गरी सम्बन्ध बनेको रहेछ ।
मनमा के गरौं–के गरौं भन्ने भइरहने । अनि, डेढ महिनाअगाडि मेरो मनमा हामीभन्दा सिनियर दिदीहरुलाई नवदुर्गा सम्मान गर्ने भन्ने कुरा खेल्यो । शहिद फिल्मस्को दुर्गा केसी र रक्षा नेपालको मेनुका थापाहरुसँग सल्लाह गरें । उहाँहरुले पनि हौसला दिनुभयो । दुर्गाजी र मेरो रेजिना फिल्मस् त आयोजक नै भयो । रक्षा नेपाल जस्तो संस्थाले पनि सघाउने भएपछि हामी उत्साहित भयौं ।
दशैंकै बेला किन कार्यक्रम गर्नुभएको ?
– हामीले लिएको धार्मिक विश्वासअनुसार दुर्गा भवानीका विभिन्न नौ रुप हुन्छन् । नेपालको चलचित्र क्षेत्रलाई इतिहासदेखि यहाँसम्म ल्याउने काममा थुप्रै दिदी, बहिनीको योगदान छ । त्यसमध्ये पनि हाम्रा अग्रज दिदीहरु, जसलाई हेरेर हामी पनि यो क्षेत्रमा आउनका लागि प्रेरित भयौं, उहाँहरुलाई दुर्गा भवानीका विभिन्न नौ रुपमा रुपान्तरण गर्ने सोचको विकास भयो । आज हामीले गर्‍यौं भने भोलि आउने पुस्ताका कलाकारलाई पनि यस्तो काम गर्नै हौसला मिल्छ । त्यही भएर यो कार्यक्रम गर्‍यौं ।
कत्तिको दुःख भयो ?
– यस्तो काम गर्ने भनेर प्रतिज्ञा गरिसकेपछि दुःख मान्नु हुँदैन । ९ जना सिनियर दिदीहरुलाई एउटै स्टेजमा ल्याउने कुरा सजिलो थिएन । सबैलाई गएर आफै भेटें । कुरा राखें । सहमत हुनुभयो । तर, कता–कता मनमा चाहिँ ‘बाइ दि वे आउनु भएन भने ?’ भनेर कुरा खेल्थ्यो । अनि, हरेक दिन उहाँहरुसँग कन्ट्याक्टमा हुन्थें । कार्यक्रममा पर्फमेन्स गर्ने साथीहरुलाई कोअर्डिनेट गर्नुप¥यो । त्यसैले दुःख हैन, व्यस्त भइयो भनौं ।
पैसाले दुःख भएन ?
– त्यो पनि दुःख मानिनँ । सकेको गरें भन्छु । कलाकार साथीहरुले कलाकारले नै आयोजना गरेको कार्यक्रम भनेर धेरै कोअपरेट गर्नुभयो । टोकन मनी भनेर थोरै थोरै पैसामा चित्त बुझाई दिनुभयो ।
केही समय फिल्म लाइनबाट हराउनु भयो । कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?
– विवाह गरें, ६ वर्षअघि । त्यसपछि श्रीमानको ट्राभल एजेन्सीमा सघाउन थालें । तीन वर्षअघि छोरी जन्मिइन् । छोरी नहुर्किंदासम्म आमालाई अलिक फ्रि भएर हिँड्न गाह्रो हुन्छ । व्यवहार पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले पनि पूरै समय दिएर चलचित्र क्षेत्रमा लाग्न सकेकी छैन । भर्खरै माननीय शान्ता चौधरीको गीतको म्युजिक भिडियोमा काम गरें । अब विस्तार विस्तारै सक्रिय हुँदैछु ।
ट्राभल एजेन्सी कहाँ छ ?
– विशालनगरमा । श्रीमान् १५–१६ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । म चाहिँ नयाँ–नयाँ भनौं ।
हराएको मान्छेले कसरी कलाकार संघको चुनाव जित्नु भयो ?
– कलाकारका रुपमा म स्थापित नै छु, केही वर्ष टाढा भएको मात्र थिएँ । हामी प्रगतिशील पक्षका कलाकार हौं । तर, यो क्षेत्रमा सबै विचारका अग्रज, सहकर्मीले माया गर्नुहुन्छ । त्यही भएर चुनाव जितियो ।
लक्ष्मण डङ्गोल नेपालमा बनेका परम्परागत घर, मठमन्दिरहरू त्यसबेलाका उच्चतम प्रविधि मानिन्छन् । यद्यपि, त्यस्ता घरहरू...
मलेसियाको रबर कम्पनीले नेपाली कामदारलाई शोषण गरेको खुलाशा
काठमाडौं । मलेसियाको रबर कम्पनीले कामदारलाई शोषण गरेको सार्वजनिक भएको छ । मलेसियामा स्थापित...
श्रम मन्त्री श्रेष्ठ एक्सनमा, यस्तालाई नछाड्ने गरे घोषणा !
मलेसिया लगायत कुन कुन देशले फेरि प्रतिबन्ध लगायो ?
अब मलेसियाले रोजगारदाता कम्पनीलाई पनि कोर्रा हान्ने !
कुवलालम्पुर सेगाम्बुटमा आगलागी, बाक्लो धुवाँले ढाके केएल को आकाश
काठमाडौं । सेगाम्बुटमा आज साँझ भीषण आगलागी हुँदा क्वालालम्पुरको आकाशमा धुवाँको बाक्लो बादल छाएको...
भारतको आन्ध्र प्रदेशमा बाढीमा परि कम्तीमा १५ जनाको ज्यान गयो, सयाैँ बेपत्ता
मलेसियाको लागि पुरानो राजदूत उदयराज पाण्डे गए पछि नयाँ नेपाली राजदूत को तयारी
माओवादीका शीर्ष नेतामाथि आ’क्र’मण, घटनास्थलमै मृत्यु !